Machini Maindasitiri Vagadziri & Vatengesi | China Machinery Maindasitiri Fekitori
Graphite masumbu vhiri
Chigadzirwa chacho chine mafuta akanaka, simba rakakura, kupisa kwakanaka kwekushisa, kupisa kwekushisa, kurwisa ngura, yakasimba oxidation kuramba, kushomeka kwakasviba zvemukati, hupenyu hwakareba hwebasa, uye unoshandiswa zvakanyanya mugirazi fiber indasitiri.
Yakakwira Yakachena Graphite Bhora
Yakakwira Yakachena Girafu graphite bhora inowanzo shandiswa muminda yekukwirira tembiricha lubrication, solid lubrication, simba chisimbiso, chiraidhi inotsvedza, nezvimwe .. Kazhinji, pane zvakakwirira zvinodikanwa zvesimba, kuomarara, kuwanda uye kumeso kupera kwe graphite mabhora mukugadzirwa uye kunyorera, saka isostatic kumanikidza graphite kana kuumbwa graphite inonyatso sarudzwa senge yakasvibirira graphite mabhora.
Graphite lubricating ikholamu / Rod / Graphite Lubricant Bar
Nekuda kwehunhu hwayo hwesimba, igirisi yakasimba. Iyo yega-yekuzora mafuta mudonzvo wakagadzirwa neepamusoro-simba uye yakachena-yakachena graphite inokodzera mafuta-emahara ekuzvidzora-ega mabheyari, anozvizora iwo mahwendefa, anozvizora iwo mabheyari, nezvimwe. kuchengetedza michina yekufambisa mafuta, vagara vachikosha mukuvandudza kwemauto nemaindasitiri azvino uye matekinoroji epamusoro, matsva uye ekucheka. Graphite diki tsvimbo ndeimwe ye graphite zvigadzirwa zvemaindasitiri mafomu, inoderedza zvakanyanya kugadziriswa kwemuchina, mari yemafuta, yakazadzisa chinangwa chese lubrication uye isiri-oiri yekugadzirisa workpieces.
Maumbirwo egrafiti impeller akareruka, ayo anogona kudzikisa kuramba kana kutenderera, uye kukakavara uye kutsvaira simba pakati pemhepo uye simbi mvura iri diki. Nekudaro, iyo degassing mwero inodarika 50%, iyo yekunyungudutsa nguva ipfupiswa uye mutengo wekugadzira waderedzwa.
Girafu graphite / graphite shaft ruoko
Graphite zvinhu pachayo ine lubrication mashandiro, ayo anotemwa nekristaro chimiro che graphite. Iyo lubricity ye graphite inokonzerwa nekunaka kwakanaka kwemvura nemhepo, kunze kwechimiro chemukati chekamuri.
Graphite chipande kuti Vacuum pombi
Graphite reza, aizivikanwawo ondomoka, chipande, itsvedzerere, kabhoni ndiro, kabhoni yakanatswa jira, inogona pamwe zvinonzi chipande. Yakagadzirwa ne graphite kabhoni zvinhu, yakasimba, inokodzera kudhinda indasitiri, pcb, blister, photoelectric nemamwe maindasitiri.
Yakasimbiswa graphite kurongedza
Iyo yakasimbiswa graphite kurongedza yakaitwa yechena yakawedzerwa graphite waya yakasimbiswa negirazi fiber, waya yemhangura, waya yesimbi isina waya, nickel waya, causticum nickel alloy waya, nezvimwewo Ine akasiyana maitiro eakawedzera graphite, uye ine yakasimba kwese, nyoro nyoro uye yakakwirira simba. Yakasanganiswa nekurukwa kwakazara kurongedza, ndicho chinhu chinoshanda kwazvo chekuisa chisimbiso kugadzirisa dambudziko repamusoro-tembiricha uye yakanyanya-kumanikidza chisimbiso.